इन्जिनियर मोहनबहादुर कायस्थको ६४ औँ कृति 'सुन त मुन्द्रे' विमोचित | आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies, आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies,
२०७४ कार्तिक २४, शुक्रबार ०८:१३ am | आजको पत्रिका
काठमाडौँ, २४ कात्तिक, पेशाले इन्जिनियर मोहनबहादुर कायस्थको ६४ पुस्तक कृति 'सुन त मुन्द्रे' विमोचन गरिएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच बिहीबार सो कृतिको विमोचन गरिएको हो ।
लघुकथा समाजको आयोजनामा भएको सो कृति विमोचन कार्यक्रममा समाजका अध्यक्ष श्रीओम श्रेष्ठ रोदन, समाजका उपाध्यक्ष तथा लघुकथाकार ध्रुव मधिकर्मी, लघुकथामै पीएचडी उपाधि हासिल गरेका डा. पुष्करराज भट्ट र कृतिका लेखक कायस्थले संयुक्त रुपमा सो कृतिको विमोचन गरेका हुन् ।
लघुकथाकार ध्रुव मधिकर्मीले 'सुन त मुन्द्रे' कृतिमाथि छोटो समीक्षा गरेका थिए । उनले कायस्थ इन्जिनियरसहित कुशल लेखक पनि भएको उल्लेख गर्दै लघुकथाको क्षेत्रमा एक उत्कृष्ट कृति पस्किएको बताए । यो कृतिलाई लघुकथा कृति नै नभनिए पनि यसमा समावेश गरिएका अधिकांश छोटा कथाहरु लघुकथाको संरचनामा बनेका उनले उल्लेख गरे । कायस्थले साहित्यका धेरै विधामा कलम चलाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'उहाँ विविधता भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।' 'सुन त मुन्द्रे' कृतिमा ३०३ वटा छोटा कथाहरु समावेश गरिएको र ती लघुकथाहरु विषयकेन्द्रित रहेका पनि उनले उल्लेख गरे ।
लेखक मोहनबहादुर कायस्थले यो आफ्नो ६४ औँ कृति भएको उल्लेख गर्दै आफूले कुनै विधाको संरचना पढेर लेखेको नभइ मनको भावना पोखेको उल्लेख गरे । उनले भने, 'मनको भावना पोख्ने क्रममा यो कृति तयार भयो ।' उनले भने, 'डायरीको एक पानामा अट्ने गरी मनमा उब्जेका कुराहरुलाई लेख्दै जाँदा ३०० भन्दा बढी रचना भएछन् । मेरो डायरी कसले पढ्न पाउला ! भनेर पुस्तकको रुपमा प्रकाशित गरेँ ।' रचना सार्वजनिक नगरे मरेर जाने धेयले यो कृति प्रकाशित गरेको उनले बताए । सबै रचना लघुकथा हुन् भन्ने आफैँलाई नलागेपछि लघुकथा भनेर लेख्न नसकेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
समाजका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभापति श्रीओम श्रेष्ठ रोदनले कायस्थका उत्कृष्ट रचनाहरु विविध स्वादमा पाठकले पढ्न पाएको उल्लेख गरे । कृतिमा समावेश कथाहरु लघुकथाकै संरचनामा भए पनि लघुकथा नभन्दिएकोले समीक्षकलाई अफ्ठ्यारो पर्ने उनले बताए । कायस्थलाई आगामी दिनमा किटान गरेरै लघुकथा कृति लेख्न पनि उनले आग्रह गरे ।
अर्को प्रसङ्गमा श्रेष्ठले पछिल्लो समय लघुकथा लेखनप्रति आकर्षण बढेको बताए । लघु कथा साहित्यको विधा हो वा होइन भन्ने तर्फ अब बहस गरिरहन जरुरी नभएको बताउँदै उनले संरचनामा रहेर धेरै भन्दा धेरै लघुकथा लेख्न पुराना तथा नयाँ लेखकहरुलाई आग्रह गरे । अझै पनि बहस वा टिकाटिप्पणी आवश्यक भने रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'सकारात्मक वा नकारात्मक बहसले लघुकथाको उन्नयनमा ठोस मद्दत गरिरहेको छ, यो जरुरी पनि छ ।' लघुकथा समाजले आख्यानको सबैभन्दा छोटो विधा लघुकथाको संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धनका लागि अभियन्ताको भूमिका खेलेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
कार्यक्रमको अर्को पाटाका रुपमा समाजद्वारा यसअघि प्रकाशित पुस्तक 'आजका लघुकथा' माथि विमर्श गरिएको थियो । डा. पुष्करराज भट्टले 'आजका लघुकथा' कृतिको समीक्षा गर्दै लघुकथाको इतिहास, विकासक्रम, वर्तमान अवस्था र समाजको भूमिका विषयमा प्रकाश पारेका थिए ।
सीमित लघुकथाकार तथा पारखीहरुको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रमको सञ्चालन तुलसीहरी कोइरालाले गरेका थिए ।